Iibso kuwa raacsan barta Instagram ee Mexico ▷ ➡️ Kuwa raacsan ▷ ➡️
Iibso kuwa raacsan Instagram-ka Mexico
December 11, 2018 0 comments 1090
Warbaahinta iyo aaladaha dijitaalka ah ayaa si joogto ah loo cusboonaysiiyaa si ay u siiyaan dadka isticmaala khibradaha isgaadhsiinta ee ugu wanaagsan. Arrinta shabakadaha bulshada, marka lagu daro inay yihiin macluumaad iyo ilo madadaalo, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sidii meelaynta iyo qalabka iibka. Waa waxa aan u naqaanno suuqgeynta dhijitaalka ah. Sababtaas awgeed, isticmaaleyaal badan ayaa go'aansada iibsato kuwa raacsan Instagram-ka Meksiko ku yaal oo hagaaji mowqifkaaga iyo mawduucyadaada.
Kuwa raba inay xayeysiiyaan badeecadooda, shirkadahooda ama summadahooda shaqsiyadeed, waxay u isticmaalaan shabakadaha bulshada inay xayeysiiyaan oo ay gaaraan halka ay doonayaan. Instagram waa madal dijital ah inta badan loo baahan yahay marka ganacsiga caqliga lihi ka walaacsan yahay. Tani waxay ugu mahadcelineysaa malaayiinta isticmaaleyaasha diiwaangashan. Sidoo kale daabacaadaha maalinlaha ah ee ka sarreeya 90 milyan iyo daraasiin jecel oo dhacaya isla maalin keliya. Sidaa darteed Shabakada bulshada ayaa ah guga awood leh oo si toos ah kuugu qaadaysa inaad gaarto yoolalkaaga.
Waxaa la xaqiijiyay in qofku u adeegsado ugu yaraan daqiiqado 30 daqiiqado Instagram maalinta. Meksiko, Magaalooyinka sida aadka ah u adeegsada dhismahan waa: Cancun, Tijuana, Puebla de Zaragoza, Mérida, Santiago de Querétaro, Mexicoicali iyo Mexico City. Sababtaas awgeed waa wax soo jiidasho leh iibsashada kuwa raacsan Instagram gudaha Mexico
Qayb muhiim ah marka la xisaabayo koontada waa tirada dadka raacsan. Waxaad sidoo kale bixin kartaa waxyaabo tayo leh, laakiin waxaan ku noolnahay adduun tiro badan. Haddii aadan lambaro ku jirin, booskaaga si dhib yar ayaa laguugu meelayn karaa. Laakiin marka loo eego duruufahaas, ayaa waxaa soo baxay adeegyo dammaanad leh Kudar kuwa raac akoonkaaga lacag lagu beddelo. Tani waa ikhtiyaar u fududaan, dhaqso badan oo loo heli karo Kordhi kuwa raacsan barta Instagram.
Sida loo iibsado taageerayaasha Instagram ee Mexico
Si aad uga iibsato kuwa raacsan barta Instagram ee Mexico waxaad leedahay bogag badan iyo wakaalado la heli karo. Kuwani waxay marba naqshadeeyaan baakadaha taageerayaasha ee u dhexeyn kara 100 ilaa 10.000 raacsan habka madal ee kor ku xusan.
Iibso kuwa raacsan Instagram-ka Mexico Waxay ku siineysaa fursad aad wax uga qabato bartilmaameedka aad uga baahan tahay dalka gudihiisa. Waxaas oo dhan iyada oo aan loo baahnayn in loo adeegsado warbaahinta caadiga ah iyo in la maalgeliyo lacag fara badan. Waxa jira dad caan ah oo caan ah, farshaxanimo iyo siyaasiyiin u qaatay xeeladan. Hadafku waa in bulshada laga abuuro saameyn isla markaana la muujiyo sumcadiisa. In kasta oo cabirka lagu dhalleeceeyay, wali waa hab fiican oo lagu kordhiyo tirada dadka raacsan iyo is-dhexgalka ka dhaca daabacaadaha.
Adeegyada qaar ka soo iibsato barta Instagram ee raacsan Mexico Waxay bixiyaan xirmo ka sii dhameystiran. Kaliya maahan xisaabaha ay adeeggu u adeegsaneyso adiga. Bot waxay sidoo kale raaci doontaa xisaabaadka dadka kale iyadoo loo eegayo abuuritaanka xiriirro waana ay ku raaci karaan. Haddii aysan sidaas yeelin, botku wuxuu joojin doonaa raacitaankiisa. Laakiin nidaamku ma doorto dhagaystayaasha. Taasi waxay ku qiimeyneysaa oo raadineysaa kuwa ku nool goobta aad dooratay iyo kuwa jinsiga aad dooratay. Iyada oo ku saleysan helitaanka natiijooyinka guuleysta iyo koontadaada waxaa lagu meeleeyaa madal dijital ah.
Shirkadaha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, ganacsatada iyo ganacsatada waxay iska dhigteen meelo lagu yaqaan Mexico iyaga oo gacan ka helaya aaladahaan cajiibka ah. Waxaas oo dhan iyada oo aan loo baahnayn in la sameeyo dadaallo ballaaran iyo maalgelin lacag ah. Waxay si fudud ugu adeegi karaan ganacsigooda markay ku raaxaystaan ​​guriga.
Hadaad rabto inaad hesho jeclaan iyo faallooyin intaa ka sii badan, Waxaa lagu talinayaa in la dhiso waxa saameeya. Taasi waa, qoraallo awood u leh inay ku xirmaan dareenka isticmaalayaasha. Sidan oo kale waxay dareemi doonaan inay ku dhow yihiin ama u dhow yihiin astaanta aad xayeysiineyso. Laakiin shaki la'aan, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso si aad ugu xoojiso astaantaada barta 'instagram' waa ka iibsato kuwa raacsan barta Instagram iyada oo loo marayo shirkad lagu kalsoon yahay.
Haddii aad rabto inaad ogaato fikradaha ku saabsan ka iibsato kuwa raacsan barta Instagram Gal xiriirinta
1 Instagram-ka Mexico
2 Sida loo iibsado taageerayaasha Instagram ee Mexico
Iibso kuwa raacsan qeyb 'Instagram': astaamaha iyo adeegsiga shabakada bulshada
Instagram TV: sida ay u shaqeyso